Coronavirus, inoramba ichikanganisa uye inogona kunonoka iyo PS5 uye Xbox Series X | Linux Vakapindwa muropa
Coronavirus, inoramba ichikanganisa uye inogona kunonoka iyo PS5 uye Xbox Series X
Matambudziko anogadzirwa necoronavirus ari kuwedzera Uye kubva pahuwandu hwevanhu vakaonekwa kuti vane hutachiona, pamwe nehuwandu hwevanhu vakafa, iyo indasitiri iri kutanga zvakare kuratidza kuparadzwa kweizvi.
Uye ndizvo here, pamwe nechizvarwa chemimwe mitsara nekuda kwekukurumidzira kwehutano muChina, kugadzirwa kunogona kudzikira uye kukanganisa zvigadzirwa zvekuunzwa kunyika, uko kwakawanda zvigadzirwa zvepasirese zvinogadzirwa, kusanganisira mitambo yemitambo.
Pari zvino Microsoft neSony havasati vataura nezve kunonoka kuitika mukuvhurwa kweconsoles yavo yemitambo, asi vaongorori vakasiyana vakatopa pfungwa yavo yekuti PlayStation 5 uye iyo Xbox nyowani inogona kukanganiswa nekunonoka uku kunokonzerwa nedenda rekonavirus.
Naizvozvi vanhu vese vane pfungwa dzekuwana koni yeaya gare gare gore rino, panguva yezororo, zvinokwanisika kuti nyaradzo idzi dzichatengeswa mukati memwaka wekutenga uye izvo zvinogona kunonoka kuvhurwa zvakanyanya, kana kuita hazviite kuti Sony neMicrosoft vapindure kumatare ekutanga.
Uye ndeyekuti chiChinese chinogadzira chikamu, inotarisira kugadzirwa kwehuwandu hwakawanda hwevatengi zvemagetsi pasirese, yakanyanya kubatwa nehutachiona hutsva.
Vaongorori vakati kana kutya kwecoronavirus kukaenderera, iyo Xbox Series X nePS5 vanogona kunonoka. izvo zvinogona kukonzeresa Sony neMicrosoft kuti vadzosere kumashure zuva rekuburitsa re "mazororo 2020".
Kunyangwe hazvo mitambo mikuru yemavhidhiyo inogadzirwa kuNorth America, Europe, neJapan, zvikamu zvizhinji zvemitambo iyi zvakashambadzirwa kuenda kuChina, uye "30 kusvika 50% yezvigadzirwa zvehunyanzvi mumitambo yekuMadokero inoitika kuChina." Uye nezve Hardware pachayo. , ingangoita 100% yekugadzirwa kunoitwa kuChina.
Ukuwo, Nintendo, yakazivisa zvakananga kunonoka mukugadzirwa nekuda kwedenda rekonavirus.
Iye CEO weNintendo, Shuntaro Furukawa akataura svondo rapfuura kuti kugadzirwa uye kutumira Yako switch switch koni uye zvinongedzo senge Joy-Con zvinodzora zvakakanganiswa. Nintendo akatanga kuendesa kumwe kugadzirwa kwayo kubva kuChina gore rapfuura kuitira kudzivirira hondo yekutengeserana, asi izvi hazvina kukwana kutsiva kukanganiswa kunokonzerwa nedenda rehutachiona.
Imwe yakakanganiswa ndeyeChipatara Chikamu (muAmerican vhidhiyo muparidzi mutambo) kubvirauye yakazivisa svondo rapfuura kuti ichanonoka kutorwa kwemutambo wevhidhiyo Nyika dzekunze Yakagadzirwa naObsidhiya Varaidzo yeNintendo Chinja nekuda kwedenda rekonavirus.
Iyo kambani yakati muTweet kuti hutachiona "hune chekuita nechikwata cheVirtuos chinoshanda pachiteshi" uye chingade kuvapa nguva yakakwana yekuzadzisa budiriro. Nekudaro, iyo yemhando vhezheni ichave ichiwanikwa kuburikidza nemuviri fomati, zvichitevera zvichemo nezvebhokisi reShanduko chigadzirwa chine chete kodhi yekurodha
Vagadziri venharembozha vari kunzwawo nyonganiso, seye Apple mupi mukuru weiyo iPhone, Foxconn, akaisa vashandi vayo vega (kuvadzivirira kubva kudenda) pamirairo kubva kuvakuru veChina.
Kudzoka mukugadzirwa kwakarongerwa Kukadzi 10, asi nechikamu chikuru chevashandi chakaburitswa mumafekitori zvichikonzera kunonoka kugoverwa kwePhones.
Nezve PlayStation 5 uye Xbox Series X, hazvisi pachena kuti kunonoka kwacho kungave kukuru sei.sezvo pasina ruzivo pane chaiwo mazuva ekuburitswa echimwe chigadzirwa.
Hazvizivikanwe zvakare kuti ndeapi mafekitori achakanganiswa uye kuti achavharwa kwenguva yakareba sei. Vatsvagiri kupota pasirese vari kushanda pakurapa hutachiona, asi mushonga unenge usina kugadzirira kwemwedzi.
China, pachayo chikamu, iri kutokurumidzira kuyedza kurapwa, asi aya miedzo yekutanga inotorawo nguva kuburitsa mhedzisiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Coronavirus, inoramba ichikanganisa uye inogona kunonoka iyo PS5 uye Xbox Series X
USB Raw Gadget, module yeKernel iyo inobvumidza kutevedzera USB zvishandiso
Vivaldi 2.11 inosvika ichivandudza iyo Pop-kunze (PiP) uye izvi zvimwe zvitsva